မအလ တို့လက်အောက် လုံးလုံးရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Wave Money – Cele Lover
မအလ တို့လက်အောက် လုံးလုံးရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Wave Money
ငွေ အဝင်အများကြီးရှိတဲ့ OS တွေ အကုန်ငွေထုတ်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ် ဆူး ရဲ့ ဒီ acc က Lvl 1 acc ဖြစ်ပြီးတော့ ငွေလွှဲငွေဝင်တောင် မှ အများဆုံး ငွေလွှဲ ၅၀၀၀၀အပြင်ပိုလွှဲမရတဲ့ Acc နော် (ဒါလည်း Os လုပ်လို့ Delivery ကငွေဝင်ငွေလွှဲရှိတာနော်)
အခုလည်း wave ထဲမှာ ၂၅၀၀၀ ပဲရှိတာ နော် ကိုယ့်ဘာသာ ဈေးရောင်းပြီးရထားတဲ့ ပိုက်ဆံ 🤣 ငွေလွှဲ ငွေဝင်ဆိုလို့ မုန့်မှာစားတာပဲရှိမယ် စလစ်တွေကအစ အကုန် တန်းစီပြီး ချပြနိုင်တယ်နော်
အေး အာ့လို Online shop သီးသန့်လုပ်တဲ့ acc ကိုမှရွေးပြီးတော့ မနေ့က Acc ဆိုင်းငံ့ခံရပါတယ် system update ကြောင့်မဟုတ်ဖူးနော် ရုတ်တရတ်ကြီး ဆိုင်းငံ့ခံရတာပါ
သိန်းဆယ်ချီပြီးငွေတွေလှုနေတဲ့သူမို့လို့ acc ပိတ်ခံရတာမဟုတ်ဖူး နော် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ သာမာန်သုံးစွဲသူ acc ကိုပိတ်တာပါရှင်
အာ့တာနဲ့ call center ဖုန်းဆက်တော့ လျောက်ထားပေးမယ်ပြောပါတယ်။ အခု ဖုန်းပြန်ဆက်ပါတယ် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း က ညွှန်ကြားချက် အရပါ ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်ရှင့်
ဘယ်ချိန်ပြန်ရမယ် မရဖူး ဆိုပြီးလည်း တိတိကျကျ မပြောပါဖူး ဘာမှအာမခံချက်လည်းမရှိပါဖူးဘာမှမလုပ်လည်း ပဲ acc ပိတ်ချတာပဲလားဆိုတော့ ဟုတ် အထက်က အမိန့်အရပါတဲ့ ရှင့်
အာ့တော့ ဘာမှမလုပ်လည်း ကိုယ့်ဘာသာဈေးရောင်းလည်း သူတို့ထင်တဲ့အကောင့် တွေအကုန် ဆွဲပိတ်နေတဲ့ ကာလဖြစ်နေပါပြီ ကိုယ့်ဘာသာ ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ပိုက်ဆံရှာလိုက်ဆေးခန်းပြလိုက်လုပ်နေတဲ့သူကိုလည်း acc ပိတ်ပါတယ်ရှင့်….
မအလ တို႔လက္ေအာက္ လုံးလုံးေရာက္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ Wave Money
ေငြ အဝင္အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ OS ေတြ အကုန္ေငြထုတ္ထားဖို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ ဆူး ရဲ႕ ဒီ acc က Lvl 1 acc ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေငြလႊဲေငြဝင္ေတာင္ မွ အမ်ားဆုံး ေငြလႊဲ ၅၀၀၀၀အျပင္ပိုလႊဲမရတဲ့ Acc ေနာ္ (ဒါလည္း Os လုပ္လို႔ Delivery ကေငြဝင္ေငြလႊဲရွိတာေနာ္)
အခုလည္း wave ထဲမွာ ၂၅၀၀၀ ပဲရွိတာ ေနာ္ ကိုယ့္ဘာသာ ေစ်းေရာင္းၿပီးရထားတဲ့ ပိုက္ဆံ 🤣 ေငြလႊဲ ေငြဝင္ဆိုလို႔ မုန္႔မွာစားတာပဲရွိမယ္ စလစ္ေတြကအစ အကုန္ တန္းစီၿပီး ခ်ျပႏိုင္တယ္ေနာ္
ေအး အာ့လို Online shop သီးသန္႔လုပ္တဲ့ acc ကိုမွေ႐ြးၿပီးေတာ့ မေန႔က Acc ဆိုင္းငံ့ခံရပါတယ္ system update ေၾကာင့္မဟုတ္ဖူးေနာ္ ႐ုတ္တရတ္ႀကီး ဆိုင္းငံ့ခံရတာပါ
သိန္းဆယ္ခ်ီၿပီးေငြေတြလႈေနတဲ့သူမို႔လို႔ acc ပိတ္ခံရတာမဟုတ္ဖူး ေနာ္ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ သာမာန္သုံးစြဲသူ acc ကိုပိတ္တာပါရွင္
အာ့တာနဲ႔ call center ဖုန္းဆက္ေတာ့ ေလ်ာက္ထားေပးမယ္ေျပာပါတယ္။ အခု ဖုန္းျပန္ဆက္ပါတယ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း က ၫႊန္ၾကားခ်က္ အရပါ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာပါတယ္ရွင့္
ဘယ္ခ်ိန္ျပန္ရမယ္ မရဖူး ဆိုၿပီးလည္း တိတိက်က် မေျပာပါဖူး ဘာမွအာမခံခ်က္လည္းမရွိပါဖူးဘာမွမလုပ္လည္း ပဲ acc ပိတ္ခ်တာပဲလားဆိုေတာ့ ဟုတ္ အထက္က အမိန္႔အရပါတဲ့ ရွင့္
အာ့ေတာ့ ဘာမွမလုပ္လည္း ကိုယ့္ဘာသာေစ်းေရာင္းလည္း သူတို႔ထင္တဲ့အေကာင့္ ေတြအကုန္ ဆြဲပိတ္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္ေနပါၿပီ ကိုယ့္ဘာသာ က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ ပိုက္ဆံရွာလိုက္ေဆးခန္းျပလိုက္လုပ္ေနတဲ့သူကိုလည္း acc ပိတ္ပါတယ္ရွင့္….
Previous Article ဆုံးပါးကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော သူရိယရဲ့ ဖခင်ကြီး
Next Article ပြေတီဦးရဲ့ဖခင်သေဆုံးတာကို မိခင်က မသိသေးတဲ့အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ မင်းသား ဝေဠုကျော်